China Heavy Disc Harrow ho an'ny orinasa mpamatsy 1BJ sy mpamatsy | RY AGRI
1BJX disc harrow antonony dia mety amin'ny fanorotoroana sy famahana ireo vovo-tany aorian'ny fambolena sy ny fiomanana amin'ny tany alohan'ny famafazana. Izy io dia afaka mampifangaro ny tany sy ny zezika amin'ny tany nambolena ary manala ny fototr'ireo zava-maniry. Ny rafitra dia manana rafitra mirindra, hery goavambe, faharetana, fandidiana mora, fikojakojana mora, ary afaka mamotika sy mitondra any anaty tany amin'ny laoniny mba hampandeha ny tany, mifanaraka amin'ny filan'ny fambolena mafonja izany.
Ny fitaovan'ny kapila dia 65MN, ity fitaovana ity dia tena mafy, noho izany dia mora ny mamotika ny tany ao amin'ny tanimboly.
Fitandremana ho an'ny fametrahana an'i Harrow
1. Ho an'ny harrow disc feno, dia tsara ny mametraka azy tsara, tsy maninona na mitovy ny enta-mavesatra; ho an'ny kiririoka kapila marihitra, mba hahatonga ny enta-mavesatra ho an'ny vondrona mitambatra dia tokony hifampisintona ny tendron'ireo harrows mifanila aminy.
2. Mba hisorohana ny toerana misy ny bearing dia tsy afaka mifanandrify amin'ny takelaka fanohanana mifandray amin'ny fefy rake mandritra ny fivoriambe, ilaina ny miantoka fa tsy diso ny toerana misy ny raozy.
3. Mba hahatonga ny fantsona mpanelanelana sy ny rake mitambatra akaiky, ny faran'ny lehibe fantsona mpanelanelana dia tokony hanakaiky ny tampon'ny vodin-tsoloky, ary ny tendrony kely amin'ny fantsona mpanelanelana dia tokony ho eo akaikin'ny tampon'ny concave an'ny rake. Raha misy elanelana eo an-toerana eo anelanelan'ny sehatry ny fifandraisana dia tsy tokony ho lehibe mihoatra ny 0,6 mm izany.
4. Farany, henjanino tanteraka ny voanjo hazo goavam-be ary akatonaho. Na voahidy tokoa ny voanjo zoro toradroa na tsia dia misy fiantraikany lehibe amin'ny fiasa sy ny ain'ny vondron-trondro. Raha somary madiodio izy io dia hifindra ny lavaka anatiny ao amin'ny takelaka misy ny vatan'ny tsirairay sy ny toradroa. Ny lavaka anaty kianja ao amin'ny lohan'ny vorona dia "hikitroka" ny boribory vatan-kazo boribory (ny vilia fantsom-panafody, toy ny zoro dia mafy), ka hiondrika na ho vaky mihitsy aza ilay hazo zoro.
Fitehirizana sy fikojakojana aorian'ny faran'ny vanim-potoana
1. Esory daholo ny tany sy ny potipoti-javatra hafa avy amin'ny kaloka
2. Lubricate arakaraka ny tsipiriany
3.Hanadio ny masinina sy ny fitehirizana, manao asa tsara amin'ny fisorohana ny masoandro.
Manaraka: Harrow disk mavesatra ho an'ny 1BQX fambolena